Kedu onye na-akọwa teknụzụ na ụlọ ọrụ gị? | Martech Zone
Wednesday, July 8, 2009 Sọnde, Febụwarị 9, 2014 Douglas Karr
Nkọwa nke teknụzụ bụ:
ihe gbasara sayensi na ahia ma obu ulo oru
Nwa oge gara aga, ajụrụ m, “Ọ bụrụ na ngalaba IT gị na-egbu ihe ọhụụ“. Ọ bụ ajụjụ kpatara nzaghachi! Ọtụtụ ngalaba IT nwere ikike igbochi ma ọ bụ mepee ọhụụ… ngalaba IT ọ nwere ike igbochi ma ọ bụ mee ka nrụpụta ọrụ na ire ahịa pụta?
Taa, enwere m obi ụtọ izute Chris site na Ngwakọta. Ọ bụ mkparịta ụka na-ekpo ọkụ ma anyị merụrụ ahụ na-aga ihe dịka nkeji iri anọ na ise gafere ebe anyị chọrọ.
Otu n'ime mkparịta ụka na-adọrọ mmasị na mkparịta ụka ahụ na-atụle onye nwe mkpebi ịzụta ebe ikpo okwu ma ọ bụ ọrụ SEO. Anyị abụọ kwara ume mgbe mkpebi ahụ dabara n'aka onye nnọchi anya IT. Anaghị m anwa ịkparị ndị ọkachamara IT - ana m adabere na nka ha kwa ụbọchị. De blọgụ maka SEO bụ atụmatụ maka inweta ndu… a ahia oru.
Agbanyeghị, ọ bụ ihe ịtụnanya na ngalaba IT na-ahụ maka ikpo okwu ma ọ bụ usoro na-ekpebi nsonaazụ azụmaahịa. Ọtụtụ oge, ana m ahụ nsonaazụ azụmaahịa (ihe ọhụrụ, nlọghachi na ntinye ego, ịdị mfe nke iji, wdg) na-ewere oche azụ na mkpebi ịzụta.
Na ịhọrọ anyị dị ka ikpo okwu ntanetị nke ụlọ ọrụ ha, ọ bụ ngalaba IT na-ekwenye na ha nwere ike mejuputa a free azịza maka ịde blọgụ. A blog bụ blog, nri?
Echefula ya na ọdịnaya anaghị edozi
Echefula ya na ikpo okwu anaghị echekwa, kwụsie ike, na-enweghị mmezi, na-enweghị isi, wdg.
Echefula ya na ikpo okwu adighi adi nma nke otutu nde peeji na otutu iri puku ndi oru.
Echefula ya na ụlọ ọrụ wuru ya jiri ọtụtụ narị puku dollar na nyocha na mmepe iji hụ na etinyere usoro kachasị mma na nnabata njikwa ọchụchọ.
Echefula ya na interface onye ọrụ dị mfe maka onye ọ bụla iji, na-enweghị mkpa ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ.
Echefula ya na sistemụ na-akpaghị aka ka ọ nweghị ihe ọmụma banyere mkpado na nhazi dị mkpa.
Echefula ya na ndị ọrụ anyị na-enyocha ọganiihu ndị ahịa anyị iji hụ na ha nwere ọganiihu.
Echefula ya na ikpo okwu na-abịa na nkuzi na-aga n'ihu iji nyere ndị na-ede blọgụ aka ịzụlite nka ha ma mee ka nloghachi ha na itinye ego na oge.
Na SEO, ọ na-abụkarị otu esemokwu. Enweela m n'akụkụ na-abụghị akụkụ nke arụmụka SEO, na-agwa gị nke ahụ ị chọghị ọkachamara SEO. Jeremy chetaara m post a!
Ihe m kwuru bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị Nchọpụta njin ọchụchọ ma na-efu ọtụtụ okporo ụzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ha mere kacha nta, ha nwere ike ọ dịkarịa ala tinye ebe ahụ mara mma ha jiri $ 10k n'ihu ndị ọbịa ole na ole. Edere post a maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-enweghị asọmpi na enweghị njikarịcha… ọ bụ arịrịọ ka opekata mpe.
Maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ asọmpi, agbanyeghị, 80% kachasị adịghị nso. 90% ezughi oke. Iji nweta ogo # 1 na asọmpi asọmpi siri ike chọrọ nka otu ụlọ ọrụ pere mpe n'ụwa. Y’oburu n’inwe onodu ihe nchoputa obula nke oma, ngalaba IT gi agaghi enweta gi na # 1. Ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ha enweta gị na peeji mbụ nke nsonaazụ.
You gaghị etinye ngalaba IT gị ka ọ bụrụ onye na - elekọta ndị ahịa gị, mana ị ga - eme ha ka ha na - ahụ maka teknụzụ nke nwere ike igbochi ụlọ ọrụ gị ịre ahịa. Ọ bụrụ na ị ga-etinye teknụzụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ… ijide n'aka na ị ga-enyocha ohere na uru ọ bụla tupu ị chee na ị ga-eme naanị ya!
Jul 10, 2009 na 2: 21 AM
Enwere ụwa dị iche n'etiti ịde blọgụ n'elu ikpo okwu na SEO atụmatụ.
Ikpo okwu blọgụ bụ sọftụwia na ngwaike, yana ngalaba IT dị mma na ijikọ ndị ahụ ọnụ. E nwekwara ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ a, ma ọ bụ n'ihi na ha nwere sọftụwia nke ha, ma ọ bụ n'ihi na ha nwere ma ọ bụ gbazite ngwaike, ma ọ bụ n'ihi na ha nwere ọtụtụ nka na ịchekwa ụdị IT a. Ajụjụ banyere otu ị si agbagha njikwa nke ikpo okwu ịde blọgụ gị n'etiti ndị na-elekọta ụlọ na ndị na-anọghị na ya bụ ndị ahịa "zụta / wuo / gbazite" nsogbu IT.
Usoro SEO, agbanyeghị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam site na ikpo okwu ntanetị gị. Can nwere ike ịnwe SEO dị oke ma ọ bụ dị egwu n'agbanyeghị ikpo okwu. Mana iji ụlọ ọrụ SEO bụ ọ bụghị dị ka iji ụlọ ọrụ IT ndị ọzọ. Ọ dị ka ịnwe ndị na-ede ederede ederede nwere ike ịtụgharị echiche gị n'asụsụ Google.
Chọpụta, ị nwere ike iji sọftụwia na-emeghe blọgụ na-emeghe n'efu. Ka anyị maa mma, Doug - WordPress na-agba ọsọ na nchekwa, kwụsie ike, ukwuu ejighi oru akụrụngwa. Ndị ọrụ nke WordPress gụnyere Dow Jones, The New York Times, Magazin Ndị mmadụ, Fox News na CNN-ha niile na-agafe ule "nde peeji gị, iri puku kwuru iri puku ndị ọrụ". Automattic (ndị na-eme WordPress) nwere ọtụtụ iri nde nweta ego, nke m chere na-eme mara mma sara mbara nnyocha na injinịa mmefu ego. WordPress abụghị ihe egwuregwu.
Agbanyeghị, WordPress bụ naanị ikpo okwu ntanetị. N'ezie, ọ bụ naanị ọkara a blogging platform - the-emeghe-orisun WordPress software (ọ bụ ezie na e nwere imerime WordPress Bochum ọrụ, gụnyere WordPress.com.) Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ogo ọ bụla nke ntụkwasị obi ma ọ bụ scalability, ịkwesịrị itinye ego na ngwaike na nka dị mkpa.
Yabụ, ngalaba IT ziri ezi na blọọgụ bụ naanị blog ma ha nwere ike iji ngwaọrụ n'efu iji mee ka blọọgụ na-aga. Mana imirikiti ọrụ na ọtụtụ uru bara uru adịghị na sọftụwia ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile ị nwere blog nwere ike ime site na usoro SEO na-aga n'ihu. Ozugbo ị matara na ọ bụ ihe ị chọrọ, ọ bụ ihe ị kwesịrị ịdị njikere ịkwụ maka.
Ihe ịma aka a bụ ịnweta ngalaba IT iji ghọta na ezigbo SEO abụghị obere aghụghọ nzuzu, na ọ siri ike, na ọ na-agbanwe mgbe niile, yana na ọ na-eme ọdịiche niile n'ụwa.
Jul 10, 2009 na 2: 52 AM
Amaghị m na ị kwenye ma ọ bụ na ị kwenyeghị na m. Mụ na gị maara na Dow Jones, The New York Times, Magazine ndị mmadụ, Fox News na CNN anaghị arụ ọrụ WordPress 'dị ka ọ dị'. Ha na agba ya n’enweghi ego akụrụngwa, ụgwọ mmepe isiokwu, ụgwọ njikarịcha nchọta ihe, wdg. Cheghị na ha na-emefu ego na-akụziri ndị ọrụ ha maka iji nyiwe ndị ahụ? Ma ọ bụ mmepe iji nyefee ọdịnaya na nyiwe ndị ahụ? N'ezie ha bụ! Lọ ọrụ ndị ahụ etinyegoro obere ego iji rụọ ọrụ ikpo okwu 'n'efu' maka ha.
A blog bụ naanị blog, mana usoro ịde blọgụ B NOTGH just naanị ikpo okwu ịde blọgụ. Isiokwu ike mita, akpaaka nke nkpado, categorization na ọnyịnye ọdịnaya na Compendium bụ nnukwu iche. Ọ chọrọ ka onye ọrụ jiri obere oge na-eche maka 'otu' esi ede blọgụ, 'otu' ga - esi bulie ọdịnaya ha, na - echegbukarị oge banyere 'ihe' ịde blọgụ. Ndị na-ede blọgụ azụmahịa kwesịrị itinye uche na ozi ha - enweghị usoro ha.
M na-ekwe gị nkwa na mmadụ ọ bụla nwere ike imeghe Compendium ma jiri nghọta tinye akwụkwọ na post ahụ ga-kachasị mma. Nke a abụghị ikpe na WordPress. Imirikiti ndị mmadụ m kụziiri otú e si ede ihe nke ọma na WordPress amaghị ihe ha na-efu na post ọ bụla.
Ọzọkwa, mgbado anya nke ngalaba IT anaghị abụkarị ihe azụmaahịa. M na-enwe ekele maka oge ndị ọgbọ m 'na-enyocha' ihe m zụtara na ngwanrọ m iji hụ na anaghị m etinye ụlọ ọrụ ahụ n'ihe egwu; agbanyeghị, ha agaghị enwe ike ịchọpụta abamuru nke ikpo okwu ma ọ bụ atụmatụ na mmetụta ya na azụmaahịa ahụ. Nke a abụghị ihe ha gụrụ maka, ihe ahụmihe ha dị na ya, ma ọ bụ ihe ekwesiri iji ha mee.
Kwe ka ndị ọchụnta ego mee mkpebi azụmaahịa! Kwe ka ọ bụrụ ndị ndụmọdụ ha tụkwasịrị obi.
Jul 10, 2009 na 4: 32 AM
Anaghị m ekwenye ma ọ bụ na-ekwenyeghị na isi okwu gị, naanị m na-eme ka okwu gị doo anya.
Onweghi onye kwuru na nnukwu ndị ọrụ nke WordPress na-agba ngwanrọ na-enweghị mgbakwunye mgbakwunye na nrụpụta akụrụngwa. I kwuru "echefula na ikpo okwu anaghị enwe ike ịba ụba maka nde nde peeji na ọtụtụ iri puku ndị ọrụ", ma nke ahụ abụghị eziokwu. O doro anya na ọ ga-ekwe omume ịba WordPress (ma ọ bụ Blogger, ma ọ bụ Drupal ma ọ bụ DotNetNuke ma ọ bụ Compendium na ihe ndị ọzọ) ruo n'ọkwa a, mana ị ga-etinye ego na ngwaike, na-akwado ngwanrọ na nka na ụzụ. Ajụjụ a abụghị -ekwe omume, ọ bụ ma ị chọrọ ime ya n'onwe gị ma ọ bụ na ịchọrọ ka onye ọzọ meere gị ya.
Ee, a ịde blọgụ ikpo okwu bụ naanị a ịde blọgụ ikpo okwu. Ọ bụ ngwakọta nke ngwanrọ na ngwaike nke na-emepụta blọọgụ. Chọpụta, ụfọdụ nwere atụmatụ dị iche iche, atụmatụ ndị ahụ nwere ike ịnwekwu uru ma baa uru karịa. Ma ị nwere IndyCar, BMW zuru ezu ma ọ bụ ụgbọ ala a pụrụ ịdabere na ya, ị nwere ụgbọ ala nwere ike ịchụga site na isi ruo A ruo B. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime ụgbọ ala ahụ dabara adaba na ụfọdụ ọrụ? Kpamkpam. Ajụjụ bụ: olee ọrụ ị na-achọ ịrụ?
Ekwenyesiri m ike na ọ bụrụ na ị tinye onye ọrụ n'akụkụ-na-n'akụkụ na Compendium na ihe ọ bụla na-emeghe ịde blọgụ n'elu ikpo okwu, na post na Compendium blog ga-achụpụkwu okporo ụzọ - ọbụlagodi na posts ndị ahụ bụ mkpụrụokwu na otu okwu. Nke ahụ bụ nnukwu uru maka ụlọ ọrụ gị! Ọ bụrụ na ikpe a na-anọchi anya ya, ọ na-eme maka ire ere dị egwu maka CB.
Ma ka anyị nyochaa ya mere otu post ahụ ga-enweta ọtụtụ okporo ụzọ. Ihe kpatara ya bu kariri n’ihi na Compendium ụlọ ọrụ ahụ nwere ọrụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. Na-emelite koodu code oge niile. Na-ejikọ ndị ahịa ahịa iji nyere ha aka iwulite aha ha. Izute ndị ahịa ma nyekwuo ọzụzụ na akụrụngwa. Maintain na-enwe nnukwu akụrụngwa a pụrụ ịdabere na ya. Ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ uru nke Compendium karịa ngwa ọrụ bụ ọrụ na-aga n'ihu na nkwado ị na-enye maka ngwanrọ gị, ndị ahịa gị, na ọdịnaya ha.
Ọzọkwa, nke ahụ bụ uru magburu onwe ya na ọtụtụ ndị ahịa gị nwere ezigbo obi ụtọ. Mana ọ bụghị akụkụ bụ isi nke ngwanrọ gị na ngwaike "ịde blọgụ." Could nwere ike nweta otu nsonaazụ site na iji sọftụwia dị iche iche (mana ọ ga-abụ ọrụ karịa!) Nke a bụ mmetụta nke ụlọ ọrụ dị ka ya DK New Media mee kwa ubochi. Onye ọ bụla tinyere aka na mkpebi maka ịde blọgụ ụlọ ọrụ kwesịrị ịghọta nuances ndị a.
Isi okwu dị ebe a bụ ebe ọrụ otu ngalaba kwụsịrị na nke onye ọzọ amalite. Enweghị azịza dị mfe maka ajụjụ a. Ọbụna nke ka njọ, ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla nke ahịrị ahụ gafere na mpụga ụlọ ọrụ ahụ na onye na-ere ahịa nke atọ, a ga-amalite inwe oghere dị iche n'etiti ụlọ ọrụ ma ọ na-esiwanye ike ịtụle ihe egwu na uru. Kedu ka ị ga - esi chebe gburugburu gị ma ọ bụrụ na ndị nọ n’èzí nwere ohere? Ma obu, site na uzo ahia: kedu ka obi siri sie gi ike na onye na-eweta ihe omuma a na-achoghi aghaghari ma mebie akara gi? Ihe ize ndụ ndị a nwere ike ịdị obere ma ọ bụ buru ibu, mana ha abụghị efu.
Ekwenyesiri m ike na ọ bụ IT na-eme ọtụtụ mkpebi gbasara teknụzụ na-enweghị nkwanye ugwu zuru oke gbasara nsogbu azụmahịa. Mana nsogbu a na - aga n’usoro abụọ — ndị ọchụnta ego kwesịrị ịmatakwu ihe gbasara IT na nke ọzọ. Rụkọ ọrụ ọnụ karịa imegide ibe gị ga-aba uru onye ọ bụla.
Jul 10, 2009 na 4: 48 AM
Daalụ maka nkọwa ahụ, Robby! Aga m akwụ site na nkwupụta ikpeazụ. M tụkwasịrị obi m ihe IT m ka ha bụrụ ndị ndụmọdụ m ka m wee ghara ime nzuzu. Agbanyeghị, agaghị m enye ha mkpebi ikpeazụ na nyiwe na atụmatụ dị maka ọdịmma kachasị mma nke ịkwaga azụmaahịa ahụ. Anyi n’onwe anyi nwere ikike nke aka ha ma ha kwesiri ihapu ha n’uzo kwesiri ekwesi.